Sampling Simple Random vs. Sampling Random Sampling
Ukwahlukana phakathi kweSampuli yokuLungisa okuLula kunye neNkqubo
Xa senza isampuli yesalathiso sisoloko sifanele siqaphele kwinto esenzayo. Kukho iintlobo ezininzi zeendlela zokusampula ezingasetyenziswa. Ezinye zazo zifanelekileyo ngakumbi kunabanye.
Ngokuqhelekileyo esiyicinga ukuba luhlobo olunye lwesampula luya kuba olunye uhlobo. Oku kuya kubonakala xa kuthelekiswa iintlobo ezimbini zeesampuli ezingafunekiyo. Isampuli esilulayo kunye nesampula esisisigxina esincinci ziintlobo ezimbini ezahlukeneyo zobugcisa bokuthabatha.
Nangona kunjalo, umahluko phakathi kwezi ntlobo zeesampuli zibuqili kwaye kulula ukuyibhala. Siza kuqhathanisa iisampuli ezingahleliyo kunye neesampuli ezilula.
I-Random echanekileyo kunye neNqabileyo engaqhelekanga
Okokuqala, siza kujonga iinkcazo ezimbini zeesampuli esizifunayo kuzo. Zizo zombini ezi ntlobo zeesampuli zikhethiweyo kwaye zicinga ukuba wonke umntu ebantwini unokuba yilungu leesampuli. Kodwa, njengoko siza kubona, asikho zonke iisampuli ezingafaniyo ezifanayo.
Ukwahluke phakathi kwezi ntlobo zeesampuli kuhambelana nenye inxalenye yenkcazo yesampula esilula. Ukuze ibe isampula esilulayo esingahleliyo, ubukhulu beqela n bobukhulu bungabonakaliswa ngokufanayo.
Isampuli esisalungeleleneyo sincike kwindlela ethile yokuyalela ukukhetha amalungu esampula. Nangona umntu wokuqala angakhethwa yindlela engalindelekanga, amalungu alandelayo akhethwe ngendlela yenkqubo ekhethiweyo.
Inkqubo esiyisebenzisayo ayicatshangwanga ukuba yinto engacwangciswanga, kwaye ngoko ezinye iisampula eziza kwenziwa njengesiqulatho esilula esingenakwenzeka singenakwenziwa njengesampula esingenangqungquthela.
Ukuze sibone ukuba kutheni kungenjalo, siya kujonga umzekelo. Siza kuzenza ngathi i-movie yeshashalazi enezihlalo ezingu-1000, zonke ezo zizaliswe.
Kukho imigca e-500 enezihlalo ezingama-20 kumqolo ngamnye. Inani labantu apha liqela labantu abangama-1000 kwi-movie. Siza kuqhathanisa isampula esilula esicwangcisiweyo sabashumi abahamba ngeefilimu kunye nesampuli esingahleliyo yesayizi efanayo.
Isampuli esilulayo esingahleliyo singenziwa ngokusetyenziswa kwetafile yeenombolo ezingahleliwe . Emva kokubala inani lezihlalo 000, 001, 002, ukuya ku-999, sikhetha ngokukhethiweyo inxalenye yetafile yeenombolo ezingenanto . Iintlobo zokuqala ezilishumi ezicacileyo ezintathu ezifundwayo kwitheyibhile zezihlalo zabantu abaza kuwenza isampuli yethu.
Ukufumana isampula esingenangqungquthela, sinokuqala ngokukhetha isihlalo kwibala lezemidlalo ngokungahambi (mhlawumbi oku kwenziwa ngokuvelisa inombolo enye engahleliyo ukusuka kwi-000 ukuya ku-999). Ukulandela olukhethiweyo olukhethiweyo, sikhetha esi sihlalo sendawo njengelungu lokuqala kwisampuli. Amalungu asele yesampuli aphuma kwizihlalo ezisezikhundleni ezithoba emva kwesihlalo sokuqala (ukuba siphelelwe yimigca ukususela esihlalweni sethu sokuqala sasisekupheleni kwebala le midlalo, siqala ngaphaya kwebala le midlalo kunye ukhethe izihlalo ezihambelana nesihlalo sethu sokuqala).
Kuzo zombini iindidi zeesampuli, wonke umntu kwi-theatre unokukhethwa ngokufanayo. Nangona sifumana iqoqo labantu abayi-10 abakhethiweyo ngoncedo kwiimeko zombini, iindlela zokusamphula ziyahluka.
Ukufumana isampuli esilula, kunokwenzeka ukuba ube nesampuli equlethe abantu ababini abahleli ngaphaya komnye. Nangona kunjalo, ngendlela esakha ngayo isampula sethu esingenangqungquthela, akunakwenzeka nje ukuba sibe nommelwane ohlala kwisampuli efanayo kodwa nokuba nokuba nesampuli equkethe abantu ababini ukusuka kumqolo ofanayo.
Ukwahlukana phakathi kweesampulu ezilula kunye neesampuli ezichanekileyo ezingahle zibonakale zilula, kodwa kufuneka siqaphele. Ukuze sisebenzise ngokuchanekileyo iziphumo ezininzi kwiimanani, kufuneka sicinge ukuba iinkqubo ezisetyenziselwa ukufumana idatha yethu zizenzekelayo kwaye zizimeleyo. Xa sisebenzisa isampuli echanekileyo , nokuba sisetyenzisiweyo, asinakho ukuzimela.
Indlela yokufakela izikhonkco kwi-Database Access
Ukudala Ubudlelwane phakathi kweeTables kwi-Microsoft Access 2010
Isikhokelo sokusebenzisa iCriteria ngokuchanekileyo kwiMicrosoft Access Queries
Ukwakha i-Database Access kwi-Ofisi ye-365
Indlela yokujonga nokuhlela i-SQL kwi-Microsoft Access
Ukudala iiWebhu zeeWebhu zeDynamic nge-Microsoft Access
USimone de Beauvoir kunye neBili-Wave Feminism
Ixesha elidlulileyo leChanttepec Castle
Indlela yokusebenzisa i-Rappel ye-Brake Rappel
ULorna Dee Cervantes
IAccin Christian Christian Admissions
Ukufundisa ukuqonda ukuFunda
Iincwadi Ezilungileyo Kwezibantwana NgeBallet neBalerinas
Iingqungquthela ze-Manga ezifuna ukuba yi-Anime
Yayiyintoni i-Menlo Park?
9 Iingcebiso eziMnandi kwiKholeji yakho
Ngaba Ufanele Uqeshise okanye Uthenge I-Truck Yakho Elandelayo?
Funda Ukuqhafaza okulula kwi-"Sauter" (ukuya kuJump)
I-Hulk Hogan Sex Tape Scandal kunye ne-Gawker Lawsuit
Ziziphi iiKs ezinhlanu zeSikhism?
I-Top 5 Roller Coasters yokuTyelela esi Sihlobo
Amalungu eBantu oLuntu kunye neMbali
Imibhalo Engcwele yamaHindu